Kusarudzwa kwemanoveli anonakidza
kupunzika kwemenyu menyu
Sayenzi ngano zvinyorwa
Nhoroondo dzezvakaitika kare
wedzera menyu yemwana
Anonakidza enhoroondo ongororo
3 akanakisa mabhuku aJK Rowling
Kana iwe uchida kufambirana nezvazvino kubva kuna J, k. Rowling, iwe uchagara uchizviwana zviri-zve-zvepamusoro zvichibva padanho repamusoro kubva kuvaverengi HERE. Kunze kwekukakavadzana kwekushandisa mazita ekunyepedzera saRobert Galbraith kana kunyangwe chirevo chakakurumbira JK Rowling, munyori wekuBritain uyu ...
3 akanakisa mabhuku naDavid Foster Wallace
Kunyangwe kuve mucherechedzo muUnited States, kuuya kwebasa raDavid Foster Wallace kuSpain kwakauya senge rudzi rwekuzivikanwa kwekupedzisira kwenhema. Nekuti David akatambura nekushushikana kwakamutambudza kubva paudiki hwake kusvika pamazuva ake ekupedzisira paaka ...
Tolkien's Hunhu hweMiddle-pasi
Panyaya yenhoroondo yezvakasikwa yakagadzirwa naJRR Tolkien, fungidziro inoguma yapunyuka kubva kune iyo yakafanana mutsara, kubva kune iyo ichipfuura munzvimbo dzekufungidzira dzakanyatsotsanangurwa uye nekurarama zvakanyanya kusvika kunzvimbo dzinooneka. Chokwadi chine chinhu chinozviisa pasi apo chakaburitswa kare ...
Iwo mashanu akanakisa mabhuku ekufungidzira
Fungidziro ndiyo yemhando yemhando iyo hudiki uye kukura zvinosangana zvakare kunyangwe zvese. Mubairo unogara uri mufaro weparadhiso inogarwa mukati mehudiki uye yakadzoserwa nekuda kwekunakidza kana makore ari kukwira kumusana kwedu. Naizvozvo zvakanakisa ...
Kuberekwa kweGamba, naJin Yong
Kufananidza zvimwe zvekunyora pasi pamwe neTolkien kurira kwekuzvidza. Saka kunanga Jin Yong semubatsiri weChinese wechiChinese anoita kunge chimwe chinhu chisina kuremekedza uye chakashambadzira kushambadzira. Kusvikira iwe wawana iko kusvika kweYong kuti kunyangwe ichidhonza yakawanda yakanangana ...
Mweya naAmai Muir, naRA Dick
Kana Alaska ichidanana ne zombie uye ikatomusuma kuvabereki vake, sei saka Mai Muir vaisazodanana neyakajairika imba chipoko? Zvese zvinhu inyaya yenguva uye chimiro. Iyo nguva inomirira kuti ikutore iwe ku ...
3 akanakisa mabhuku aLee Carroll
Pakati pemabasa akadai saMudiki Muchinda naAntoine de Saint Exupéry uye Iyo Neverending Nhau naMichael Ende, yaizowana mukana mukuru weAlice muWonderland. Kuverengerwa kwakakodzera kwazvo kwevana uye kwete kwakadaro kudiki. Inoshanda yakazara nefungidziro uye yeasingaverengeke kukosha kwevanhu. Mu …
Pakati peusiku Zuva naStephenie Meyer
Uye pazvakaratidzika kuti Stephenie Meyer akange aendeswa kune kumwe kunetsana kwekunyora, mune kiyi yebhuku rematsotsi, uye nerusununguko rwaifungidzirwa zvine chekuita nesaga yemadekwani, vampire vechidiki nekurumwa kwavo kwenyama nekunhuwirira kwegariki nekusingaperi , pakupedzisira zvaisave izvo zvaigona kudaro. Nekuti Meyer ...
Peji1 Peji2 ... Peji6 Zvadaro →
Kubva 2005 © Juan Herranz 2022
mhosho: Hapana kukopa